Zinedine Zidane oo ka hadlay haddii Kooxdiisa Real Madrid ay u dhaqaaqeyso Christian Eriksen ama Donny van de Beek – Gool FM
(Madrid) 22 Sebt 2019. Macallinka kooxda Real Madrid ee Zinedine Zidane ayaa iska diiday inuu hoos u dhigo wararka soo jeedinaya in Naadiga reer Spain ay u dhaqaaqi karto bisha Janaayo midkood xiddiga Tottenham Hotspur ee Christian Eriksen ama midka kooxda Ajax ee Donny van de Beek.
Waxaa jiray talo soo jeedinno ah in Los Blancos ay dooni karto saxiixa xiddig khad dhexe ah bilowga sanadka 2020 kaddib markii ay ku dhibtootay khadka dhexe ee marxaladaha bilowga ee ololaha xilli ciyaareedka 2019-20.
Si kastaba ha ahaatee, Zidane ayaa markii wax laga waydiiyay danta la soo sheegay ee doonista xiddigahan midkood waxa uu ku adkaysanayaa inay tahay arrin naadiga ah.
“Eriksen ama Van de Beek? Taasi waa arrin kooxda ah.” ayuu Zidane u sheegay Suxufiyiinta. “Kooxdu waa waxa ay tahay, waxaan nahay kuwa halkan jooga, waana ku tartami doonnaa waxa aan haysanno.”
Real Madrid kuwaasoo guuldarro 3-0 kala kulmay Kooxda Paris Saint-Germain tartanka Champions League isbuucii la soo dhaafay ayaa u safri doona caawa oo Axad ah naadiga Sevilla, iyagoo maanka ku haya guul ay ka gaaraan inay ka dhigayso kuwo hoggaanka u hayaha horyaalka Spain isbuuca lixaad.